Southampton & Man Utd oo bar-baro gool la’aan ah ku kala baxay. | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Southampton & Man Utd oo bar-baro gool la’aan ah ku kala baxay.
Southampton & Man Utd oo bar-baro gool la’aan ah ku kala baxay.
Gool haye Sergio Romero ayaa bad-baadiyay rigoore xilli kooxdiisa bar-bardhac gool la’aan 0:0 ah ay ku kala baxeen labada koox kulankaa oo ka dhacay St Marry Stadium.
Kooxda Saints-ka lagu naaneyso ayaa ciyaarta hogaankeeda qaban kartay 5 daqiiqo oo kaliya markii ay socotay kadib qalad uu galay Eric Bailly , balse rigoorihii loo dhigay Southampton waxaa qasaariyay Manolo Gabbiadini.
Gool hayaha dooqa labaad ee kooxda Manchester United Sergio Romero ayaa kulankii xalay sameeyay bad-baadin dhowr ah waxaana uu noqday ciyaar yahankii kulanka ugu wanaagsanaa.
Sidoo kale Sergio Romero sanadkan waxaa uu saftay 17 kulan kulamada Manchester United kaliya 6 gool ayaana laga dhaliyay , sidoo kale kulankii xalay waxa uu ahaa kulankiisii labaad ee horyaalka xilli ciyaareedkan.
Kooxda Manchester United ayaa bar-bar dhac gashay 15 kulan xilli ciyaareedkan waana markii ugu badneyd oo ay hal xilli ciyaareed intaasoo kulan bar-baro galaan tan iyo 1991-1992 markaas oo ay sidan oo kale 15 kulan bar-baro galeen kulamada horyaalka.
Kooxda Southampton ayaa kulankii xalay sameysay 6 shoot oo bartilmaameed ahaa kaliya kooxda Tottenham oo axadii 7 jeer kubad bartilmaameed ku ah goolka tuurtay ayaa ka sareysa Dhamaan tar-tamada Manchester United la wajahayo xilli ciyaareedkan.
Goolkii rigooraha ahaa ee uu xalay qasaariyay Gabbiadini waxa uu la micno ahaa in koox Saints-ku ay qasaariyaan Saddexdii rigoore ee ugu dambeeyay oo lagu abaal mariyay waxaana ay kala yihiin Dusan Tadic oo rigoore qasaariyay kulankii Hull City & Shane Long oo isna qasaariyay kulankii Middlesbrough.
Sergio Romero ayaa noqday gool hayihii 8-aad ee kooxda Manchester United oo rigoore bad-baadiya Premier League , sidoo kale waa markii ugu horeysay tan iyo David De Gea oo rigoore bad-baadiyay kulan uu wajahay kooxda Everton kaasi oo dhacay bishii October 2014.
Kooxda Southampton ayaa wajahday 4 kulan oo kooxaha sare ah waxaana ay ku dhamaadeen gool la’aan waana markii ugu horeysay taariiqda oo ay sidaa sameeyaan.
Manchester United xitaa hadii ay guuleystaan kulankooda uharay waxa ay noqoneysaa inay horyaalka ku dhameystaan guulahoodii ugu yaraa oo 17 jeer oo kaliya ayey guuleysanayaan tan iyo 1990-1991 markaa oo ay 16 kulan guuleysteen.